रुद्रनाथ डिस्चार्ज, पाेखरा ल्याइँदै - Samadhan News
सुवेदीले भनेका छन्– एक्कासी ड्याम्म आवाज आयाे, त्यसपछि हाेसमा आउदा रुखमा अड्केकाे थिए !
समाधान संवाददाता २०७८ असोज ८ गते १७:२२
दुर्घटनामा परेर सामान्य घाइते भएका पाेखरा १७ का रुद्रनाथ सुवेदीकाे फाइल तस्विर ।
पाेखरा । विहिबार राति मुग्लिङ नजिकै विभत्स कार दुर्घटनामा परेर पनि सामान्य घाइते भएका पाेखराका व्यवसायी रुद्रनाथ सुवेदी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । साेही कारमा रहेका ३ जना र कार अझै त्रिशुली नदीमा बेपत्ता छन् ।
सुवेदीलाई विहिबार राति नै उपचारका लागि भरतपुरस्थित पुरानाे मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएकाे थियाे । चितवन प्रहरीका अनुसार उनलाई आजै दुर्घटनास्थलमा लगेर प्रहरीले पाेखरा पठाएकाे छ । सामान्य अवस्थामा रहेका सुवेदीलाई पाेखरा ल्याइदैछ ।
सुवेदीले प्रहरीलाई दिएकाे जानकारी अनुसार गाडी प्रेम भुजेलले नै चलाएका थिए । दुर्घटनापछि सुवेदी रुखमा अड्केका थिए । श्राेतका अनुसार सुवेदीले प्रहरी समक्ष भनेका छन्– एक्कासी ड्याम्म आवाज आयाे, त्यसपछि हाेसमा आउदा रुखमा अड्केके थिए । सुवेदी राष्ट्रिय बाणिज्य संघ कास्की वार्ड न. १७ का अध्यक्ष हुन् ।
बिहीबार राति पाैने १२ बजे चितवनकाे इच्छाकामना गाउँपालिका–५ नाग्दी खोलाबाट ग२च ४९१८ नम्बरको कार त्रिशूलीमा खसेको हो । साे कार च्याम्बर अफ कमर्श कास्कीका बरिष्ठ उपाध्यक्षा एवं सामाजिक व्यक्तित्व प्रेम भुजेलले चलाएका थिए । अघिल्लाे सिटमा बसेका सुवेदी कारबाट बाहिर उछिट्टिए भने प्रेमसहित पाेखरा १७ का लेखबहादुर भुजेल र इश्वरी भुजेल वेपत्ता छन् ।